Siri amin'ny macOS vaovao Sierra dia toa tsara | Avy amin'ny mac aho
Siri amin'ny macOS vaovao Sierra dia toa tsara
Tsikeraina fa ny mpanampy Siri ho an'ny Mac aza mankany amin'ny kinova 10.12 macOS Sierra, fa ny fiandrasana mendrika. Efa mivoaka i Siri izao, ary na dia voalohany amin'ireo kinova beta developer aza, dia tena mandaitra tokoa.
Apple dia tsy sarotra ny nitondra an'i Siri ho an'ny Mac, niandry elaela taorian'ny fanombohana ofisialy hanampiana azy amin'ny Macs ary ny safidy avelany hataontsika dia mitovy amin'ireo azontsika atao amin'ny fitaovan'ny iOS.
Rariny ireo ny sasany amin'ireo safidy misy amin'ny Siri ho an'ny macOS Sierra, saingy misy maro hafa:
Anontanio ny toetrandro
Sokafy Telegram, sns.
Mandefasa zavatra amin'ny media sosialy (Twitter, Facebook)
Mikaroha ny application Maps
Hizaha sary avy amin'ny sary fampiharana
Miantso amin'ny fotoana rehetra
Mihainoa lisitry ny mozika
Ampandehano ny maody "aza manelingelina"
Mitadiava namana ao amin'ny Sarintany
Zahao ny mailaka raha manana vaovao izahay
Fanontaniana tsy ampoizina hikarohana ny harato
Ampandehano Wi-Fi na Bluetooth
Ary lisitra misy asa tsy misy farany izay misokatra ho an'ireo mpampiasa Mac miaraka amin'ny mpanampy manokana ao amin'ny macOS Sierra. Tena liana ahoana no ilazako fa tena tiako ilay feo vavy ao amin'ny mpanampy ny macOS, fa kosa ny lahy dia robotic kokoa ary tsy dia resy lahatra loatra aho fa afaka misafidy izay tadiaviny avy amin'ny sehatr'i Siri ny tsirairay.
Misy ny safidy hampiasa Siri amin'ny fiteny rehetra ananantsika amin'ny Mac, noho izany tsy olana izany. Etsy ankilany, azontsika atao ny mieritreritra an'i Apple fa maninona izy no tsy manampy ny fampidirana amin'ny alàlan'ny baiko: Hey Siri amin'ny Mac, satria tsy azo atao ny mampiasa azy io ary ilaina ny manindry ny kisary Dock na eo amin'ny baran'ny menio hampavitrika azy. Tsy olana izany, fa raha tiantsika ny hahatratra ny Mac. Mety ho olana ny fampifanarahana amin'ny alàlan'ny tamba-jotra Wi-Fi na ny toa izany, mba tsy hihetsika amin'ny iPhone / Apple Watch sy amin'ny ny Mac hatramin'ny fotoana.
Ny traikefan'ny mpampiasa amin'ny ankapobeny dia tena tsara na dia zava-baovao aza izany ary hampiasantsika azy matetika kokoa noho io antony io, saingy mety tena ilaina amin'ny toe-javatra sasany manoloana ny Mac mba hamokatra bebe kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » macOS Sierra » Siri amin'ny macOS vaovao Sierra dia toa tsara
Ny baiko fitendry ho an'ny fampandehanana azy dia azo alamina ihany koa. Amin'ny alàlan'ny default dia misy fn + habaka
Ahitsy Andrés, fandraisana anjara tsara!
Arovy ny efijery MacBook 12-inch anao amin'ny Moshi's iVisor
Mianara maka kaody mora amin'ny fampiharana Swift Playgrounds